iLivid aan shaqayn mar dambe? Raadi xalkii iyo Isku day Alternative ah
> Resource > Download > iLivid aan shaqaynayn? Mushkiladii loo xaliyo
"Waa maxay sababta aan iLivid aan shaqaynayn? Mar kasta oo aan isku dayaan in ay soo bixi hees ka youtube uu leeyahay "guuldareystay" oo markii aan wax miiran retry uu leeyahay "guuldareystay" mar kale. Waxaan kaliya u helay shalay oo shaqeeyay mar. Maxaa qalad ah u wada dhacaysaan? "-Emily
Emily posted dacwada ee iLivid on Jawaabaha Yahoo!. Qof kasta waxa uu leeyahay dhibaato la mid ah, iyada oo leh? Waayo, kuwa gacmaha kor saar, aad ku sugan tahay meel ku haboon in xal weyn u hesho. Halkan waa ka duwan iLivid haboon inuu ku caawiyo. The Wondershare AllMyTube ( AllMyTube for Mac ) qabtaan shaqo wanaagsan soo degsado videos online ka ah goobaha, sida YouTube, vimeo, Dailymotion iyo wax ka badan. Ka dib markii ay soo degsado, waxaad u isticmaali kartaa si loogu badalo videos in qaabab kasta si ay u haboon kombuyuutarrada gacanta aad. Ma sugi karaa in ay isku day ah? Aan iska baarto.
Marka hore kala soo bixi barnaamijkan si loo soo dajiyo on your computer. Waxaa jira laba nooc oo waxaan qaadi doonaa version Windows sida tusaale.
1 Raadi videos aad jeceshahay
Hel helitaanka aad jeceshahay videos online oo guji video ay ku ciyaaraan. Goobahaas ayaa video waxaad dooran kartaa kala duwan YouTube inay qaar kale oo badan sida vimeo, Dailymotion iyo wax ka badan.
Fiiro Gaar ah: Waa in aad u helaan jecel videos aad mid ka mid ah daalacashada soo socda: IE, Firefox iyo Chrome.
2 Download videos tan kale iLivid
Mouse ka badan si ay u xaq u top of video ah oo ah Download button ka muuqan doontaa. Riix badhanka iyo barnaamijka bilaabi doonaan in ay soo bixi video ah.
Waxa kale oo aad isku dayi kartaa hab kale oo waa wax la mid ah waxa iLivid falaa. Copy url video in bar cinwaanka ka dibna riix ka URL paste button.
Fiiro gaar ah: Waxaad ku dari kartaa sida badan videos sida aad jeceshahay. Barnaamijkan kala soo bixi kartaa 5-10 videos isku mar.
3 Beddelaan videos in qaab kasta oo
Marka aad heysato videos ah, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad iyaga u ciyaaro ee qalabka la qaadi karo aad. Haddii ay sidaa tahay, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay in marka hore la badalo videos ah. Raadi videos ee lagala soo bixi maktabadda iyo riix badalo button on xaq ah wax video ah. Markaas doortaan qaab kasta oo ku haboon doonaa qalab aad iyo riix OK si ay u bilaabaan soo celiyaa.
Ka dib markii in, waxaad awoodi karaa inuu wareejiyo gediyay videos in qalab aad oo wuxuu ku raaxaysan mar walba iyo meel walba. Waxay u egtahay weyn, soo maaha? Waa in aad u siiyo isku day ah oo u jiheysan in xabbad weyn oo waayo-aragnimo video.
Eeg a video hoos ku tutorial tallaabo-tallaabo: